Igodo iji merie afọ ntachi n'ụzọ dị irè | Bezzia
Igodo iji merie afọ ntachi n'ụzọ dị irè
Susana Garcia | | Ndụmọdụ gbasara ahụike, Ahụike
El afọ ntachi bụ nsogbu nke nwere ike ibilite site n'oge ruo n'oge ma ọ bụ na ọ nwere ike bụrụ ihe na-adịghị ala ala, ebe ọ bụ na e nwere ndị na-enwekarị nsogbu a. Ọ bụrụ na anyị nwere ya n’oge, anyị ga - ejikwa nri na omume aka ịmata ihe adịghị mma, ọ bụrụ na ọ bụ ihe a na - ahụkarị ma anyị hụ na usoro ọgwụgwọ anaghị arụ ọrụ, ọ bụ oge ịgakwuru onye ọkachamara Agbanyeghị, ugbu a anyị ga-enye gị igodo iji luso afọ ntachi n'ụzọ dị irè na mbụ.
El afọ ntachi nwere ike ịpụta maka ọtụtụ ihe, site na nri na-adịghị mma na nrụgide ma ọ bụ nsogbu eriri afọ dị iche iche. Ọ dị mkpa ịnwa igbochi nsogbu a. Ọ bụrụ na ọ dịghị njọ, a ga-edozi ya n'ụzọ dị mfe site na nri na ntuziaka ziri ezi, mana ọ bụrụ na nke a emeghị, anyị ga-achọ ihe kpatara ya, ebe ọ nwere ike bụrụ ihe ka njọ.
1 Na-a fluụ mmiri
2 Mkpụrụ osisi megide afọ ntachi
3 Nri nri
4 Oge oge anọ
5 Mee mmega ahụ
6 Zere iji laxatives
Na-a fluụ mmiri
Otu n'ime ihe ị ga - eme bụ ị drinkụ nnukwu mmiri mmiri. Nsogbu a na-enwekarị mgbe afọ ntachi bụ na stools enweghị mmiri ma ọ bụ ya mere ha ji anọ na eriri afọ. Yabụ ọ bụrụ na anyị a drinkụọbiga mmanya oke, ndị a ga-enwe nkwekọ kwesịrị ekwesị. Mmiri dị ezigbo mkpa na ahụ anyị na ọ bụ ya mere ọ dị mkpa ị toụ ma ọ dịkarịa ala lita mmiri abụọ kwa ụbọchị n'etiti mmiri, infusions na ihe ọ naturalụ naturalụ ndị sitere n'okike. Nke a na-abara anyị uru n'ọtụtụ ihe, ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na ọ ka mma maka ịga nke eriri afọ kamakwa ọ na-enyere aka ilekọta anụ ahụ, jigide ọkwa mmiri n'ime ahụ ma ọ bụ mezie mgbaze, yabụ ọ bụ otu igodo ahụ ike dị mkpa ka anyị ga-aga n'ihu.
Mkpụrụ osisi megide afọ ntachi
Mkpụrụ osisi nwere ọtụtụ ihe ọma. N'otu aka, ha na-enye anyị ekpomeekpo dị ụtọ, mana ha dịkwa oke mma, ebe ọ bụ na ha mmiri dị oke oke ma ha nwere ọtụtụ vitamin. N'ihe banyere afọ ntachi, anyị ga-achọ ndị nwere eriri karịa ma ka mma ịlụ ọgụ. Offọdụ ndị kachasị atụ aro bụ plums, oroma na kiwi. Mkpụrụ ndị a ga-enyere anyị aka n'ụzọ dị irè megide afọ ntachi ma ọ bụrụ na anyị tinye ha na nri ma ọ bụ nri ụtụtụ, ịmalite ụbọchị.
Ọ dị mkpa na nri anyị kwesịrị ekwesị ma na-enye anyị nri ndị dị mkpa. Ezigbo nri na-eme ka afọ rụọ ọrụ nke ọma ma meziwanye eriri afọ. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye mmiri dị mkpa, eriri na ihe ndị na-edozi ahụ kwa ụbọchị, ahụ anyị ga-arụ ọrụ nke ọma. Zere nri ndị dị ka shuga na nri ndị a gbanyere mkpọrọgwụ, ebe ọ bụ na ihe ndị a na-emebi ihe ma na-eso eme ka usoro ahụ na-afụ ụfụ n’ime ahụ.
Oge oge anọ
na Usoro nchịkwa na-enweghị nchịkwa na ịgbanwe nri na-eme ka afọ ntachi pụta, n’ihi na mgbanwe ndị a pụrụ imesi anyị ike. Ọ bụ ya mere o ji dị mma na anyị ga-agba mbọ na-ahazi oge anyị, na-eri nri n'otu oge. N'ụzọ dị otú a, ahụ ga-eguzobe usoro nke ga-adịrị ya mfe karị ịzaghachi.
Mee mmega ahụ
Mee egwuregwu nwekwara ike inyere aka nsị eriri afọ anyị. Egwuregwu na-eme ka mọzụlụ na-eme ka ahụ nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma ma na-agbasasị nke ọma. Ihe a niile na - emetụtakwa usoro mgbaze na nsụgharị nsia na - esochi, yabụ ọ bụrụ na anyị emega ahụ kwa ụbọchị, anyị ga - ahụkwa uru dị na nke a.
Zere iji laxatives
Ọ bụrụ na ha adịghị oke mkpa ma ọ bụ na ndị ọkachamara edebeghị ha, ọ bụ ọ ka mma ịmalite ịmalite ịxụ ọgwụ. Ọ dị mma maka eriri afọ iji rụọ ọrụ nke aka ya, na iji ndị laxatives eme ihe nwere ike ime ka ọ rụọ ọrụ ọbụlagodi. Ọ bụ ya mere na tupu ị gakwuru ha ị ga-anwale ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ahụike » Igodo iji merie afọ ntachi n'ụzọ dị irè
Otu nwoke nwere ike isi maa nma n’ebe nwanyi no